Chhaharaa | रुवि खानहरुले कहिलेसम्म मुक्तिको लागि लडिरहनुपर्ने हो?
रुवि खानहरुले कहिलेसम्म मुक्तिको लागि लडिरहनुपर्ने हो?
घरेलु हिंसाको क्रममा मारिएकी नकुन्नी धोवी र निर्मला कुर्नीको न्यायको पक्षमा रुवि खान, सकिना तेली जस्ता मानवअधिकारकर्मीहरु कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो ? अन्याय भएको टुलुटुलु हेरेर बसे भोलिको दिनमा झन् यस्ता जघन्य अपराधले विकराल रुप लिने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै ती दलित महिलाहरुले न्याय नपाउञ्जेलसम्म रुवि खान र सकिना तेलीहरुले लडिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो यहाँ यस्तै नकुन्नी धोवी र निर्मला कुनिै जस्ता हिंसाका शिकार कति भएका छन् छन् । लेखा जोखा गरि साध्य छैन ।
नेपालको जनसंख्याको आधारमा आधा भन्दा बढी घरका महिलाहरु पुरुष सरह समान अधिकार पाउन सकेका छैनन् । जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुले पाउनुपर्ने प्रतिशतमा मा त विभेद छनै सामाजिक विभेदले पनि पराकाष्ट नाघेको छ । देशभर महिलाहरुलाई बोक्सीको आरोपमा दिशा, पिसाव खुवाउनुका अतिरिक्त यातना दिने क्रम जारी छ । पछिल्लो समयमा पनि रौतहटमा एक निरिह महिलालाई दिशा, पिसाब खुवाइयातना दिइएको घटना बाहिर आएको छ । यति मात्र होइन विधुवा स्त्रीलाई उत्तिकै असमान व्यवहार गरिदो छ । ररातो लुगा लगाउन नहुने, रातो टिका लगाउन नहुने, साईत वा चाड पर्वहरुमा विधुई महिला अघि पर्नै नहुने, विधुई महिला पुरुषहरुसँग हाँस्न बोल्नै नहुने जस्ता बन्धन आजको आधुनिक समाजमा पनि छदैछ । महिलाहरुलाई पुरुषको तुलनामा कानूनी संराण र कानूनी व्यवस्थामा समेत विभेद छ । यी नै राष्ट्रको जटिल समस्या भएकोले रुबि खानहरु अहिले न्यायको लडाई लडि रहनु परेको हो । महिलाहरुमाथि हुने सामाजिक कुरिति मध्ये देउकी प्रथा पनि अझै जीवितै छ । हामी सुदुरपश्चिम नेपालमा गयौ भने त्यहाँ देउकी प्रथा अझै कायम रहेको पाउँछौं । कन्या केटी देउतालाई चढाउँदा आफ्नो मनकामना पुरा हुने विश्वास त्यहाँ अझै जीवित छ । यसरी चढाइएको केटी मन्दिरकै खटन पटनमा रहनुपर्ने व्यवस्था अझै छ । आजकल आयआर्ज कम हुँदै गएकोले त्यस्ता चढाइएका केटीहरु यौन व्यापारमा लिप्त
देखिन्छन् । त्यही प्रथाले नेपालमा यौन प्रथा झाँगिदै गएको पाइन्छ । यसैगरी वादीप्रथा अर्काे सामाजिक कुरीतिमध्ये एक हो । वादी समुदायमा नाँचेर गाएर अरुलाई मनोरञ्जन दिने उनीहरुको प्रथाले बिस्तारै विस्तारै यौन प्रथामा आकर्षित भएको देखिन्छ । वादी समुदायमा छोरी जन्मा यौन व्यापारमा लगाउन पाइने र आयआर्जन गर्न पाउने हुँदा त्यस भेगमा छोरीको जन्मलाई हर्षाैल्लासका साथ स्वागत गरिन्छ । वादी समुदायका चेलीबेटीहरु १८÷२०÷३०÷३२ सम्म यस्तो व्यवस्थामा लाग्ने गरेको भेटिएको छ । यो व्यवसायलाई समुदायले नै मान्यता दिएको पाइन्छ । यस्तो कुरीति अझै पनि हाम्रो पश्चिम नेपालमा हटेको छैन ।
यस्तै महिलाहरुलाई यतना दिने अर्काे पाटो पनि देखिन्छ । जसमा सासु, आमाजु, नन्दले दाजुभाइ वा छोरालाई कुरा लगाउने र पत्निलाई कुटाउने चलन पनि नेपालमा एक ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यसैगरी बुहारीको दिनचर्या एकदमै संवेदनशील घडीमा बित्ने गरेको पाइएको छ । बुहारीप्रति शंका, खोट, अविश्वास गर्दै अलक्षित, अटेरी, अनुशासनहिन, सीप र दक्षता नभएकी जस्ता विभिन्न लाञ्छना लगाई बुहारीलाई यातना दिने काम गरिन्छ जो नेपाली समाजको निमित्त ज्यादै घातक सिद्ध हुँदै आएको छ । यसैगरी दाइजो नल्याएको निहुँमा बुहारीलाई यतना दिनेदेखि लिएर हत्यासम्म गरिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । यी विभिन्न कारणहरुले गर्दा नेपालमा महिलाहरुको उद्दार र मुक्ति हुन नसकेको प्रष्ट छ । यसतर्फ गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गम्भीरताकासाथ पाइला चाल्नुपर्ने